Ny Fahamaizan’ny Diego Portales · Global Voices teny Malagasy
Ny Fahamaizan'ny Diego Portales
Voadika ny 12 Septambra 2017 16:34 GMT
(Marihina fa tamin'ny 7 Martsa 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Tsia, tsy olona velona i Diego Portales. Manana fahatsiarovana ara-tantara maro ao anatin'io rindrina io ity tranobe Shiliana ity. Hatramin'ny nahatongavan'ny demaokrasia teto amin'ny fiainanay, tamin'ny taona 1998, nampiasaina ho foibe fototra hanaovana fanisam-bato sy fanambarana ny vokatra ofisialin'ny fifidianana ity tranobe ity. Misy sampana iray ao izay sahanin'ny Minisiteran'ny Fiarovana. Talohan'izay, tamin'ny taona 1972, nanambara izany ho Ivontoerana Ara-kolontsaina ny filoha Salvador Allende, ary tamin'ny taona 1973, taorian'ny fanonganam-panjakana, dia lasa foiben'ny fitantanan-draharaha Pinochet izany. Manazava izany sy ny antsipiriany hafa ao amin'ny bilaoginy (ES) i Jorge Pérez, izay ilaina mba hahatakarana ny maha-zava-dehibe an'ity tranobe ity ara-tantara .
Ny antony ofisialy nahatonga ny afo dia ny hoe tsy nisy ny fikojakojana ny rafitra herinaratry ny tranobe. Nanimba ny 40%-n'ny rafitra iray manontolo ny afo. Momba ny olan'ny fikojakojana, namoaka tao amin'ny bilaoginy (ES) i Jorge Sepúlveda fa “nirodana ny rafi-pitondrana noho ny faharatsian'ny fikojakojana. ” Nanazava momba ny zava-niseho ara-tantara samihafa sy ny zavatra niainany manokana izay manampy amin'ny fahatakarana ny antony nitrangan'izany sy ny fomba hitarafana izany ao anaty kolontsaina ihany koa izy.
Avy amin'i Pitufa ny fomba fijery iray hafa momba ny zava-misy, vavolombelona iray nanatrika ny afo izy, niaraka tamin'ny namana maromaro teo amin'ny manodidina ary nanoratra fa nitondra azy ireo nandeha ho any Diego Portales ny fofona. Naka sary i Pitufa rehefa nandeha teny an-dalana izy ireo, izay azonao jerena ato(tsy hita intsony?).